ESI EDOZI ERRORXCUDART_20.DLL - ISIOKWU - 2019
Ọ bụrụ na mmalite nke egwuregwu (nke ikpeazụ, nke a bụ Borderlands), njehie na-egosi na mmalite nke usoro ihe omume agaghị ekwe omume, n'ihi na faịlụ dị mkpa na-efu na kọmputa ahụ, achọla ebe ị ga-ebudata physxcudart_20.dll, dozie njehie dị mfe karị.
Enweghi ike itinye faịlụ physxcudart_20.dll na NVidia PhysX, ya bụ, na ịwụnye PhysX adịghị edozi njehie (dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike idozi njehie physxloader.dll). Nbudata faịlụ a site na ụdị nchịkọta akwụkwọ nchịkọta DLL dị iche iche bụkwa nhọrọ ọjọọ, ọ nwere ike ime ka ị budata ihe ọjọọ maka onwe gị.
Ntụle dị mfe maka njehie physxcudart_20.dll mgbe ịmalite egwuregwu ahụ
Njehie a gosipụtara na n'eziokwu na borderlands.exe (ọ ga-ekwe omume na nke a na-eme na egwuregwu ndị ọzọ) n'ihi ihe kpatara ya bụ ịnwa ịkwanye faịlụ physxcudart_20.dll kama cudart.dll, nke dị na nchekwa egwuregwu, ọ bụ ya mere anyị ji ahụ nje usoro na ozi na physxcudart.dll na-efu.
Iji dozie njehie a dị nnọọ mfe: chọta cudart.dll faịlụ na folda egwuregwu (ị nwere ike ịnweta njirimara nke faịlụ zoro ezo na usoro faịlụ), mee otu ya na folda ahụ ma weghachite ya na physxcudart_20.dll, emesia Borderlands kwesịrị ịmalite n'ekwughị site na ndudue.
Ọ bụrụ na n'elu anaghị enyere aka, mgbe ahụ NVidia PhysX nwere ike ghara arụnyere na kọmputa gị (ọ dịkwa mkpa maka egwuregwu ahụ). Ịnwere ike ibudata nsụgharị ọhụrụ site na saịtị ndị ọrụ, n'oge a n'oge a: http://www.nvidia.ru/object/physx-9.13.0725-driver-ru.html (mana n'ozuzu, ọ ka mma ịga nvidia.ru ma chọta PhysX onwe gị , dị ka nsụgharị na-emelite).